सफा भाँडा माझ्ने t तरिकाहरू | बेजिया
Toñy Torres | 22/07/2021 10:00 | घर
घरको सरसफाई गर्नका लागि बिभिन्न सफाई बर्तनहरू, स्काउरी pad प्याडहरू, कपडाहरू, कपडाहरू र झाडूहरू धेरै उपयोगी छन्। तर ती सबै उपकरणहरूमा ब्याक्टेरियाहरू सulate्कलन हुन्छ र त्यो खेर फालियो यदि तिनीहरू सफा भएन भने तिनीहरू घरको सतहहरूमा वितरित हुन्छन्। निस्सन्देह जुन केवल स्वच्छता समस्या मात्र होइन, तर स्वास्थ्य समस्या पनि हुन सक्छ।
त्यसकारण यी प्रत्येक भाँडाहरूलाई नियमित आधारमा आफ्नै सफाई चाहिन्छ। त्यसोभए मात्र तपाईं यो सुनिश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंले आफ्नो घर राम्रोसँग सफा गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि यदि तपाई फोहोरले भरिएका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक कोठा सफा, सफा र कीटाणुमुक्त बनाउन प्रयास गर्नु बेकार छ। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँ कसरी सजिलै आफ्नो घर सफा बर्तन सफा गर्न सक्नुहुन्छ, निम्न सुझावहरूको नोट लिनुहोस्।
1 सफा भाँडा सफा गर्ने तरिका
1.1 कसरी व्यापक झाडू सफा गर्ने
1.2 Mop सफा गर्न
1.3 स्पञ्जहरू र स्कुररहरू
1.4 कसरी कपडा र रगहरू सफा गर्ने
2 सफाई सफाई, सफाई दिनचर्याको एक हिस्सा
सफा भाँडा सफा गर्ने तरिका
यदि तपाईं साथीहरूका प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, आइकॉनिक टेलिभिजन शृंखला जुन अझै पनि प्रत्येक दिन नयाँ अनुयायीहरूलाई यसको प्रीमियर पछि २० वर्ष पछि आकर्षित गर्दछ, तपाईं सफाई पागल पागल उत्कृष्टता, मोनिका सम्झनुहुनेछ। अन्तिम एपिसोड मध्ये एकमा, यो चरित्रले आफ्नो भ्याकुम क्लीनरको साथ सफा गरिरहेको छ र ठूलो सानो सफा गर्नको लागि सानो प्रयोग गर्दछ। उहाँको अन्तिम वाक्य हो, यसलाई सफा गर्न को लागी एक सानो थियो.
यद्यपि त्यस समयमा यो शृ in्खलामा थुप्रैको रमाइलो वाक्यांश थियो, तर सत्य यो हो कि चरममा नजाईकन प्रत्येक भाँडा सफा गर्नु आवश्यक छ। तपाईंको भ्याकुम क्लीनर प्रयोग गर्दा तपाईंले ट्या tank्की खाली गर्नुपर्दछ, यसको भागहरूमा एक नम कपडा पार गर्नुको साथै।
कपाटमा धुलो सफा उपकरण राखिएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? तार्किक, सही। ठिक छ, सबै चीजसँग त्यस्तै हुन्छ। यी एकल संग सफाई चाल, तपाइँ तपाइँको सफाई आपूर्तिको चाँडै सफा गर्न सक्नुहुनेछ, तिनीहरूलाई प्राय: प्रतिस्थापन नगरी।
कसरी व्यापक झाडू सफा गर्ने
बाक्लो-झुम्कािएको कंघी वा पुरानो ब्रश पाउनुहोस्, यसले तपाईंलाई व्यापक ब्रशको ब्रिस्टल बीच जम्मा भएको फोहोर हटाउन मद्दत गर्दछ। पछि, न्यानो पानीको एक ठूलो कचौरा र डिटर्जेंटको एक स्प्याश तैयार गर्नुहोस्। झाडू डुबुल्का र यसलाई लगभग २० मिनेट को लागी भिजाउन दिनुहोस्। समाप्त गर्नका लागि, पानीले कुल्ला र खुल्ला हावामा सुकाउनुहोस् र उल्टो पार्नुहोस्, ताकि ब्रिस्टल्स विकृत हुँदैन।
Mop सफा गर्न
कम्तिमा प्रत्येक तीन हप्तामा एक पटक एमओप सफाई गर्नुपर्छ। तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ न्यानो पानी र एक तेल हटाउने डिटर्जेंट को साथ बाल्टिन भर्नुहोस्, डिश वाशर जस्तै। यसलाई आधा घण्टा भिजाउन र मपलाई राम्रोसँग निकाल्न दिनुहोस्। यसलाई सफा पानीमा फिर्ता राख्नुहोस्, र धुलो र साबुन हटाउनको लागि मपलाई धेरै चोटि भिजाउनुहोस्।
स्पञ्जहरू र स्कुररहरू
स्काउरि pad प्याडहरूले खानाको मलबे स accum्कलन गर्दछ जसले स्वास्थ्यको लागि खतरनाक ब्याक्टेरियाहरू निम्त्याउँछ। तिनीहरूलाई स्क्रबिंग पछि धेरै राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्, राख्नुहोस् तातो पानी, बेकिंग सोडा, र सेतो सफा सिरका संग भिजाउनुहोस्। तिनीहरू शुद्ध र कीटाणुरहित हुनेछन्।
कसरी कपडा र रगहरू सफा गर्ने
न्यानो पानी, एक कप बेकिंग सोडा, सेतो सफा सिरका को एक अर्को र एक कागती को रस संग एक कचौरा तयार गर्नुहोस्। यसलाई 30० मिनेटसम्म भिज्न दिनुहोस्, त्यस समय पछि, प्रत्येक कपडा राम्रोसँग रगनुहोस्, सफा पानीले कुल्ला र सुख्खा हावामा अनुमति दिनुहोस्। तपाईं तिनीहरूलाई लुगा धुने मेसिनमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि तपाईं सफा लुगालाई कपडासँग मिसाउन सिफारिश गरिदैन, त्यसैले यो अनावश्यक उर्जा र आर्थिक खर्च हुनेछ।
सफाई सफाई, सफाई दिनचर्याको एक हिस्सा
यदि तपाइँ प्रत्येक प्रयोग पछि तपाइँको सफाई उपकरणहरू सफा गर्ने बानी राख्नुहुन्छ भने, तपाइँ तिनीहरूलाई धेरै सजिलो तरिकामा सफा राख्न सक्नुहुन्छ। फोहोर जम्मा भएपछि मात्र घरभरि वितरण हुन्छ। तर पछि को सफाई र कीटाणुशोधन को काम जटिल गर्न को लागी। घर सफा र कीटाणुमुक्त राख्नुहोस् तपाईंलाई आफ्नो घरमा अधिक सहज र आरामदायी महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
भाँडा सफा गर्न तपाईको सफाई तालिकामा केहि मिनेटहरू थप्नुहोस् जुन तपाईंले प्रयोग गर्नुभयो। तपाईंको घर सफा हुनेछ, तपाईं कीटाणुहरू र अन्य खतरनाक ब्याक्टेरियाहरूबाट जोगिनुहुनेछ। र यसैले तपाई आराम र आरामदायी घर पाउन सक्नुहुनेछ तपाईको आराम र शान्तिका लागि।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » सफा भाँडा माझ्ने4तरिकाहरू
6 फिल्मको प्रीमियर अगस्टमा रमाइलो गर्न